Ndakatozoona kuti ndasvira rimwe zimhamha mukadzi wemunhu mulorry. – Vanoda Zvinhu
Aaaa ini zvangu ndichibva kumusha kwedu muna July kuma4am ndichiti ndidzokerewo kubasa kuMasvingo apa kuchitonhora heavy, nditsvage transport ingawanike apa time dzebasa dzirikungofamba. Papera chinguva lorry UD ndokusvika apa kumberi kwakazara kumasure kwaiva nevakadzi two (2) vakafuka jira. Driver ndokudanidzira achiti,”jambira mukati ufukewo jira munavamwe ndini ndariisira imi ikoko”. Ndakabva ndapinda wanei mamai maviri mujira apa kuchiuraya munhu nechando. Ini ndokuenda side raiva nemai yakanaka ndakanyatsotoucher nephone yangu kuti ndisarudze side rine shinda yemai.
Seshurawo ndakanzwa zimhamha riya richiti pinda mujira ungafa nechando apa ini semunhu ange agarisa ndisingachazivi mhata yanga yatomira kuita chipikiri kare maziso otopera simba nenyere. Imi mai vakabatana ivavo apa mazamo acho soo ka ndikangomafunga izvezvi yotomira. Ndichingopinda mujira ndakavabata ruoko kuti ndimhorese ndokunzwa heat isingaite mumaoko avo apa ini ndichibva pachando kudaro. Rakada kuregedza ruoko rwangu ndikaramba. Pasina nyaya ndokungozoona ruoko rwangu rwotoenda pazamo ndiye wiii mukati, apa maybe zimhamha riya rakanyara rimwe racho ndokuti nekanzwi kadiki diki, “usadero mhani!”Sezvamunongozivavo zvekurambidzwa rambidzwa ndozvisingadi mboro inotowedzera kutsamwa worse apa kuita danda yotoburitsa tumvura mberi kare.
Zimhamha riya rinenge range ragarisawo risingazivi mboro saka tange tasangana vagarisa vose. Rakabva rati iwe ngatirare kuchakasviba apa mhepo inopinda yakawanda kana takagara. Ini ndikati zvangu zvaita, ndiye gwedere tose ruoko rwangu ruchingori mukati muzamo kudaro. Apa rimwe racho raida kuita nyaya naro asi range risisakwanisi nekunakirwa rongokakama ndokungozoti ,”sisi totaura kana tasvika ndichiri nehope ini” izvo dzaiva nhema range ronakwa neni. Ini ndikabva ndaziva kuti ndatorihwinha apa lucky enough ndaiva ne condom semunhu ange agara achivhima nekugarisa ikoko. Fast ndakariruma condom ndakabata neruoko 1 rumwe ruchibata kabeans apa rongofembereka zimhamha riya ratoturika rimwe gumbo paspare wheel yelorry yaiva kumashure kwataiva ikoko apa beche rose ravhurika ratota kare. Ndichingopedza kupfeka , yose nekumashure sezvo range rakangotarisa kuna sisi richivavhara senge hapana iri kutambika ndini uyo wiiiii yose mukati rongondidhonzerera kuti ipinde yose ndokuti nekanzwi kadiki dikiii,” usabvisa kani koirisa ndisisi vangu ava havana basa chero vakafungira hazvina basa isa kani , koirisa inonaka kani shuuu yuwiii iiiiiiii yaaaaa isaaa , koira kani svira usabvisa”.
Nekumirisa kwayange yakaita kuti nditi ndakaresva kudambura condom here kana kuti, ndakazongonzwa condom kuty puuum kuputika ndokuvhomora ipapo ipapo zimhamha riya rikaita yekugamha kuidzorera mukati rikati nekanzwi kaye,”dzorera kani hazvina basa mhani ndoda kutunda ini isa kani iwe!”. Ndange ndichadii ndikati Gehena ndouyoko ndiye yose wiii apa ndange ndambotunda kare mucondom risati radambuka ndokuchienderera mberi meat to meat apa sandi kuzipa ikoko taingoti tikasvika pahump or pothole yozvikoira yega ummmmmm ndakarikwesha lucky enough kana kumbozomirawo muroad kusvika tasvika Masvingo. Rakazotora number dzangu dze4n rikati ndanakwa nemboro yako shaa uuye kumba kwangu kana murume wangu asipo ndichakuudza upamhe kundisvira futi ndanakwa newe. Ndopandakaziva kuti ndakwira mukadzi wemunhu mulorry UD. Zvekuba zvinonaka ummmmm worse kana iri fast track.
Fungexxxjeyyy ” Kukwatsura”
· Last modified August 19, 2015 2
Next story Nyoro nemukadzi we workmate paya
Previous story Kuwachiswa kwandakaitwa ne Sugar Mama kuno kuHarare